ဇူလိုင်လ 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
လများ: ဇူလိုင်လ 2019
100 နှင့်အတူ Mansur နှေးနေ့
တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor နှေးသူ, ဧပြီလ 8 ထံမှမြို့နယ်မှကောက်ယူအားလုံးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်လေ့လာမှုများစတင်လုပ်ကိုင် "100 Mansur နှေးနေ့ရက်များနှင့်အတူ" စာအုပ်ငယ်အတွက်ကိုပြောသည်။ တင်ဒါနထေိုငျသူမြို့တော်စည်ပင်ကအပေါငျးတို့သဌာနများအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ transparent ထိုးထွင်းသိမြင်မှု [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, Göztepeလမ်းသွားလမ်းလာတံတား၏သက်တမ်းတိုးဘို့လုပ်ကိုင်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလမ်းညွန်အတွက်အင်္ဂါနေ့နံနက်တိုင်အောင်သောကြာနေ့ညဥ့် 100 သြဂုတ်လသြဂုတ်လကနေ Goztepe ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပန်းခြံလမ်းက D-2, 24.006အတွက်တံတားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်, ဖုံးလွှမ်း xnumx'y [ပို ... ]
Erdemir သံမဏိကိုလည်းYarımcaပင်လယ်ကွေ့ Oyak ဦးပိုင်အတွက်ကြွေစက်ရုံနှင့်အတူဆိပ်ခံတံတားဝယ်ခရိုင်၏နယ်နိမိတ်အတွင်းတည်ရှိပြီးသောစက်ရုံ, ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီနှင့်ဒူဘိုင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါကွတ်ကီးပိုက်ဆံဝယ်ယူပြည် Oyak တစ်ဝက်ဒီမှာပါ [ပို ... ]
တူရကီရဲ့ဦးဆောင်မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီကြီးများ၏တဦးတည်း, လယ်ထွန်စက်အဖြစ်, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း, လေကြောင်းနှင့် Hema စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း, စက်မှုအမှုဆောင်အရာရှိစိန့် ashram ၏TÜDEMSAŞ Hema ဒုတိယသမ္မတသွားရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
အဆိုပါ Professional ကအသင်း၏ Medipol အရေးယူ "ဒါဟာတိတ်ဆိတ် Kalmar လုယူလိမ့်မည်"
disc တူရကီဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ် KESK တူရကီဘဏ်ခွဲပလက်ဖောင်းတစ်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် AOC မြေယာကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Fahrettin ခင်ပွန်းနှင့်အတူ TCDD ၏တူရကီပြည်နယ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ, တူရကီကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်တူရကီပြည်သူ့စာရင်းကိုင်ဘဏ္ဍာရေး Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ASMMMO) ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း [ပို ... ]
ကြည်းတပ်လက်ခံခြင်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက် Boztepe ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Inc လက်အောက်ခံ ORBEL ဒါဟာကေဘယ်လ်ကားလိုင်းများက operated နှင့် Boztepe ရွှေအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုဂရုစိုက်ရန်ရယူခြင်း "240 operating နာရီ" ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂရုစိုက်အကြား 05.08.2019 07.08.2019, တပ်မတော် Boztepe အတွက်အဓိကခရီးသွားဒေသများ၏တဦးတည်းကျင်းပ [ပို ... ]
သူကတာရှုမွို့2ကတ္တရာသုံးစောငျ့ Gulab စက်မှုဆိုက်ကိုဖုန်နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်
Gulab စက်မှုဇုန်တာရှုမွို့2နှစ်ပေါင်းအခမဲ့များအတွက်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခ ဖြစ်. ယုအရောင်းဖန်တီး Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဖွဲ့များကတ္တရာအားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနေ့ကသူသည်အခွင့်အလမ်းမှာကတည်းကအရောင်းအပြီးကတည်းကဟု, ဒီဦးတည်ချက်အတွက်အလုပ်ရုံးကိုယူ [ပို ... ]
ဥပမာ Kayseri ပို့ဆောင်ရေးဆိုက်ပရပ်စ်ခဲ့
မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်၏တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ, မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြည်သူ့အလုပ်လုပ်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Undersecretary ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား Mamdouh Büyükkılıçသွားရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်းသူဟာ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တည်ရှိသောအလွန်အောင်မြင်သောအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုထောကျပံ့ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ [ပို ... ]
Sakarya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc က ရထားလမ်းစနစ်ကတည်ထောင်လွန်ခြင်းကိုခံရမည်
တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အစီအစဉ်ဒါပေမယ့်အလေးပေးအဖြစ်မကြာမီအပြီးအပြတ်ကောက်ရထားလမ်းစနစ်ကပြဿနာတစ်ခုမျိုးအဖြစ်ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း, မိမိစာနယ်ဇင်းကြေညာချက်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမီးရထား-စီးပွားရေးဌာနခွဲကသမ္မတ Cemal Yaman ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Sakarya ဌာနခွဲမီးရထား [ပို ... ]
Bursa အမြင့်မြန်နှုန်းရထားအနာဂတ်? .. အချိန်ထွက်အပြေးသောအခါ, လူ့မှတ်ဉာဏ်အလျင်အမြန်မေ့လျော့ ... စတား ပို. ပို. ထွန်းလင်း, ဧည့်သည်များကနေ့တိုင်းတိုးပွါးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမိုင်းနှင့်သဘာဝခရီးသွားလုပ်ငန်း၏အမှတ်တံဆိပ်များအကြားကွား Bursa အပြင်ဘက်ဧည့်ခံကြသည်ပင်စားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူငါးမျှား [ပို ... ]
Malatya - Cetinkaya လိုင်း TCDD5ပေါ်မှာတည်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးမြေပေါ်၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အပေါ်တင်ပြချက်များကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ ဒီဇင်ဘာလ9အတွက်အရာစီမံကိန်းကိုဒေသတွင်းဒါရိုက်တာ Mustafa Çalıkသန်းဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ် 506 221 2019 တထောင် TL, [ပို ... ]
TCDD İzmir Urla စခန်းအချိန်ကာလများလိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်
TCDD İzmir Urla စခန်းအချိန်ကာလများနေရပ်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်: တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD), အİzmirရဲ့ Urla ပညာရေးနှင့်မြို့အတွင်းရှိအပန်းဖြေစက်ရုံသည် railwaymen ကြားတွင် Urla စခန်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ နွေရာသီစခန်းထဲမှာထေိုမှုနှုန်းကအရမ်းဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် Gedik တက္ကသိုလ်ရဲ့ '' တစျခုမှာခါးပတ်တစ်ခုမှာလမ်းမ '' တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping စီမံကိန်းလေ့လာမှုတစ်ခုပို့ချလျက်ရှိသည်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်-ဥရောပအာရှသုတေသနကောင်စီအတွက်နိုင်ငံရေးနှင့်မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးကိုလည်းဖောင်ဒေးရှင်းကဒါရိုက်တာ Mher Sahakyan join ပါလိမ့်မယ်။ အစ္စတန်ဘူလ် Gedik တက္ကသိုလ်, တရုတ် [ပို ... ]
ပေါ့ဆမှုအပေါ်ဆိုးဝါးမတော်တဆမှုတွင်အောက်ပါမိသားစုတိုင်းပြည်အရာရှိတွေကမီးရထားတာဝန်ခံအထွေထွေမန်နေဂျာသရုပ်ဆောင်များ၏ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေစစ်ကြော affiliates န်ကြီးဌာနဘုတ်အဖွဲ့မှာသူတို့ရဲ့လက်ထောက်နှင့်ဒုတိယဝန်ကြီးသူတို့ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် AKP အားဖြင့်နှစ်ဆလစာလက်ခံရရှိသည်ထင်ရှားတွေ့ရှိရ [ပို ... ]
သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန် Izmir အတွက် 2019 ဇွန်လခုနှစ်တွင် Decrease
အဆိုပါİzmirဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုပေးသောသတင်းအချက်အလက်များအရသိရသည်တူရကီစာရင်းအင်းဌာန (TSI), Izmir အတွက် 2019 နှစ်တစ်နှစ်အစောပိုင်းကဇွန်လအတွက်တူညီတဲ့လတစ်လသည်နှင့်အညီ, ပို့ကုန် 22,2 635 ဒါသန်းဒေါ်လာလျော့နည်းသွား, သွင်းကုန်ဒါ 35,3 586 သန်းဒေါ်လာလျော့နည်းသွား [ပို ... ]
Adrenaline နှင့်ဖျော်ဖြေမှုလိပ်စာ Sukaypark
Osmangazi မြူနီစီပယ်မြို့တော်ကို Sukaypark အဆောက်အဦ, On-site ကို Cable ကိုရေနှင်းလျှောစီးစင်တာလမ်းကြောင်းအားဖြင့် imparted နှင့်ရေဂိမ်းများစကိတ်စီးပန်းခြံ adrenaline နှင့်ပျော်စရာပေါင်းစပ်ပေးထားပါတယ်။ တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးကေဘယ်လ်ကြိုးရေနှင်းလျှောစီးစင်တာ Sukaypark [ပို ... ]
စက်လှေကားအဆင့် Chain Buy ပါလိမ့်မယ်
ဝန်ကြီး Turhan: 'အောင်မြင်ခြင်းဆီသို့ရောက်ရှိတစ်နှစ်လျှင်ရထားလမ်းမိုင်အကွာအဝေးလာကြပျမ်းမျှ 135' '
ဝက် DPI ကိုဆိပ်ကမ်းရထားလမ်း link ကိုဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ 30 2019 အပေါ်ဆိပ်ကမ်းဧရိယာ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရုံးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌ Anil ၏ကမ္ဘာ့အစည်းအရုံးကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားနှင့်အတူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan ပါဝင်ပတ်သက်မှု [ပို ... ]
အဆိုပါမီးရထား Parade ကနေပိတ်ကိုငါ့တန်းပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ Balikesir Altıeylül၏ (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှုကြောင့်သတင်းခေါင်းစဉ်အပေါ်အရေးယူမှနိုင်ငံသားများ၏ borough အတွက်မော်တော်ယာဉ်၏ကျမ်းပိုဒ်၏ပိတ်သိမ်းဖို့အဆင့်ကိုကူးတစ်ဦးရှင်းပြချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ TCDD ဖြင့်ကြေညာချက်, "ဒီနေ့ (30.07.2019) အချို့သောမီဒီယာ [ပို ... ]
ကူးတို့ Passenger လုံခြုံမှုယူခံရဖို့တာဝန်ခံလျင် 1 အတွက်
1 2019 ကနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကူးတို့အပေါ်ခရီးသည်များ၏အတိအကျအရေအတွက်ကားထဲတွင်ခရီးသည်များထံမှတရားစွဲဆိုမည် detection နဲ့ဘဝဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်သောလိုအပ်သည့်အစီအမံများယူ, သြဂုတ်လအတွက်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ကူးတို့အတွက်ခရီးသည်များတင်ဆောင်လာသော [ပို ... ]
level Crossing Malatya သလဲသီးလိုင်းအတွက်တိုးတက်လျက်ရှိသည်
TCDD5။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှုအတွင်းအဆင့်ကိုကူးနယ်နိမိတ်ယခုနှစ် 2018 2018 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်5အဆိုပါတိုးတက်မှုအလုပ်ယခုနှစ်အတွင်းစတင်။ သလဲသီး-line ကို Malatya ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုမိုင်အကွာအဝေး: တိုးတက်မှုအကျင့်ကိုကျင့်၏ပြီးစီးအတွက်တန်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှလုပ် 71 + 425 248-471 46 အပိုင်းပိုင်း [ပို ... ]
Avcılar Metrobus လမ်းကြောင်းများအတွက်မီး Output Tool ကို breakdowns!
Avcılar Metrobus လမ်းကြောင်းများအတွက်မီး Output Tool ကို breakdowns! Avcılarတစ် metrobus အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခရီးသည်မီးအင်ဂျင်အမှားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကိုရပ်တန့်။ မီးAvcılar Metrobus Metrobus အဆိုပါBeylikdüzü၏ညှနျကွားအတွက်မော်တော်ယာဉ်ရဲ့အင်ဂျင်ပြေးအနီးတွင်ရပ်တန့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သောခရီးသည် [ပို ... ]
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဇူလိုင်လ 31 1908 Hejaz မီးရထား
ယနေ့တွင်သမိုင်းဇူလိုင်လ 31 1908 Hejaz မီးရထားအတွက်ကြောင့်မက်ဒီနာရောက်ရှိခဲ့သည်။
226 သန်း TL တူရကီ BB '' က Metro ငွေ '' အရေးဆိုမှုများကနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, မြေအောက်ရထား, ဆောက်လုပ်ရေး၏ကုန်ကျစရိတ်များ၏ငွေပေးချေမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာပြောင်းလဲမှု၏ခိုင်ခိုင်လုံလုံ, 2019 226 ဝန်ကြီးဌာန၏ပေးဆောင်ရရန်တစ်နှစ်သန်းပေါင်ကြေညာခဲ့သည်။ အဟောင်းတွေ applications များဟာစည်ပင်သာယာပိုက်ဆံန်းကျင် 35 သန်းပေးဆောင်မယ်လို့အင်အားသုံးအတွက်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ် (ABB), ယနေ့ [ပို ... ]
အမျိုးမျိုးသောနေရာများအခန်း၏လယ်ပြင်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက် Izmir ဆိပ်ကမ်း, တာကနိုင်ငံတော်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး Izmir ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 330919 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 1.441.815,32 TL နှင့် 1.986.388,69 အကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ်များ၏တင်ဒါရလဒ်ထိနျးသိမျးအလုပ်လုပ် Concreting ဒေသများ [ပို ... ]
ဝန်ကြီး Turhan, ထိုအခမ်းအနားတွင်အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ DP ကမ္ဘာ့ဖလားYarımcaဆိပ်ကမ်းမီးရထား Connection ကို, တူရကီမှာရှိတဲ့ 70 ရာခိုင်နှုန်းကိုသုံးတိုက်ကြီးလမ်းကြောင်းကနေပင်လယ်ထက်ပိုပြီးကဝိုင်းနယ်နိမိတ်, ဂျီဘရောလ်၏ရေလက်ကြားနှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာသည်စူးအက်တူးမြောင်းနှင့်အာရေဗျကျွန်းဆွယ်နှင့် [ပို ... ]
ငွေအခြေအနေ Kahramankart အတွက်စမတ်ဖြေရှင်းချက်
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လျှင်မြန်စွာ NFC ကိုမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု boarding, ချိတ်ဆက်မှု Card ကိုဘော်ဒါနှင့်အတူအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုဖို့သူနိုင်ငံသားများမှလက်မှတ်တွေမှဝင်ရောက်ခွင့်လွယ်ကူစေရန်အလို့ငှာထဲမှာ, Intelligent သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်အောက်ပါနီးကပ်စွာနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသော (မိုဘိုင်း [ပို ... ]